अगस्ट 23, 2018 नोभेम्बर 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक	14 Comments घर, वास्तुशास्त्र
वास्तुशास्त्र प्राचीन विज्ञान हो । वास्तुशास्त्रलाई हिन्दु शास्त्र र आधुनिक विज्ञानले पनि विश्वासिलो आधार मान्ने गर्छ । वास्तुशास्त्र अनुसार मानिस बस्ने घर अथवा भवन निर्माण गर्दा कुन दिशा शुभ कुन अशुभ हुने कुरा यसरी विश्लेषण गरेको छ । वास्तुशास्त्रको पालन गरी बनाइएको घरमा बस्दा सुख, शान्ति एवं समृद्धि प्राप्त हुन्छ। यस्तो घरमा बस्दा उत्साह, उमङ र उल्लासको अनुभूति हुन्छ । वास्तुशास्त्रमा घरको कुन भाग कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जानकारी दिइन्छ ।
घरमा कुलदेवताको चित्र हुनु अत्यन्त शुभ मानिन्छ। यसलाई पूर्व वा उत्तर भित्तामा झुन्डाउनुपर्छ। पूजाघर टिन वा फलामको हुनुहुँदैन। आश्विन महिनामा दुर्गा माताको मन्दिर स्थापना गर्नु शुभ मानिन्छ। यसबाट पुण्य प्राप्त हुन्छ। घरमा एक बित्ताभन्दा ठूलो पत्थरको मूर्ति स्थापना गर्नाले गृहस्वामीलाई सन्तान प्राप्त हुँदैन।
पूजा कोठा शयन कक्षमा बनाउनुहुँदैन। पूजाकोठा शौचालयको ठीक माथि वा तल हुनुहुँदैन। घरमा शिवलिङ्ग, तीन गणेश, दुई शंख, दुई सूर्यका प्रतिमा, तीन देवीका प्रतिमा, दुई गोमती चक्र र दुई शालिग्रामले गृहस्वामीमा अशान्ति ल्याउँछन्। पूजाकोठाको रंग हलुका क्रिम तथा सेतो हुनुपर्छ। भगवानको तस्बिर वा मूर्ति नैऋत्य कोणमा राख्नुहुँदैन। यसले काममा अवरोध उत्पन्न गर्छ।
भान्सामा तीनवटा पिर्का राख्नुहुँदैन। यसले घरमा झगडाको वातावरण निम्त्याउँछ। भान्सामा कहिल्यै रुनुहुँदैन। यसो गर्दा बिरामी पर्न सकिन्छ। खाना पकाउने ग्यास पूर्व दिशामा हुनुपर्छ। यदि भान्सा आग्नेय वा वायव्य कोणलाई छोडेर अन्य कोणमा भए वर्नरको स्थिति आग्नेय कोणमा हुनुपर्छ।भान्साको पवित्रता तथा स्वच्छता कुनै मन्दिरको भन्दा कम हुनुहुँदैन। यसो गर्दा माता अन्नपूर्णको कृपा सधैं रहन्छ। भान्सा घरको दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रमा बनाउनु उत्तम मानिन्छ तर ठाउँ नभए उत्तर-पश्चिममा पनि निर्माण गर्न सकिन्छ।
खानपिन कक्ष को रंग हलुका हरियो तथा नीलो बनाउनुपर्छ। पूर्व फर्केर खाना खाँदा मानिसको उमेर बढ्छ। दक्षिण फर्केर खाना खाँदा प्रेतत्व प्राप्ति हुन्छ। पश्चिम मुख गरी खानाले मनुष्य रोगी बन्छ। उत्तर फर्केर खाँदा आय तथा धन प्राप्ति हुन्छ।
सयन कक्ष पूजा गर्ने स्थानमा हुनुहुँदैन। शयनकक्ष पूर्व हुनुलाई शुभ मानिन्छ। यसले नियन्त्रण शक्तिमा वृद्धि हुन्छ। धन-सम्पत्तिको चाहना राख्नेहरूले अन्न, गृह, गुरु, अग्नि र देवताको स्थानमाथि सुत्नुहुँदैन। अन्न भण्डार, गौशाला, गुरुस्थान, भान्सा र मन्दिर सुत्ने कोठामाथि बनाउनुहुँदैन। शयनकक्ष नैऋत्यदेखि आग्नेय तथा नैऋत्यदेखि वायव्यतर्फ नै बनाउनुपर्छ।
घरका अग्रजहरूको कोठा पश्चिम-दक्षिणतर्फ बनाउनुपर्छ। आफूभन्दा सानाको कोठा पूर्व वा उत्तरतिर बनाउनुपर्छ। यसो गर्दा सम्बन्धमा सहजता उत्पन्न हुन्छ। सधै पूर्व वा दक्षिणतर्फ सिरानी गरी सुत्नुपर्छ। पूर्वतर्फ शिर गरेर सुत्नाले विद्या प्राप्त हुन्छ। दक्षिणतर्फ शिर गरी सुत्दा धन तथा आयु वृद्धि हुन्छ। पश्चिमतर्फ शिर गरी सुत्दा चिन्ता बढ्छ। उत्तरतर्फ शिर गरी सुत्दा आयु घट्छ।
स्नानगृह र शौचालय एकै ठाउमा भएको अशुभ मानिन्छ। यसले जीवनमा कुनै न कुनै बाधा उत्पन्न गराउँछ। शौचालयमा मार्बल लगाउनुहुँदैन। शौचालयको भित्ता र टायल्सको रंग आफ्नो चाहनाअनुरूप राख्न सकिन्छ।
घरको नैऋत्य कोण शयनकक्षका लागि शुभ मानिन्छ। यो कोणमा घरको ठूलो स्टोर हुनुपर्छ। सुत्दा सिरानी दक्षिण वा पूर्वतिर हुनुपर्छ। घर एकतल्ले भन्दा बढी भए गृहस्वामीको कोठा सबैभन्दा माथि निर्माण गर्नुपर्छ। बाल बालिका कक्ष बाल बालिकाहरूको शयनकक्ष पूर्व वा इशान कोणमा हुनुलाई शुभ मानिन्छ अध्ययन भवन, सभा र पठनपाठनका लागि यो क्षेत्र शुभ मानिन्छ । पाहुना कोठा पाहुनाका लागि बनाइने स्थान उत्तर-पश्चिम वा त्यसको आसपास हुनुपर्छ।ब्यक्तिगत कक्ष संगीत वा नृत्य साधना आदिका लागि अलग स्थान बनाउन नसकिए दक्षिण-पूर्वमा बनाउनुपर्छ। मनोरञ्जन कक्ष दक्षिण वा पश्चिम नैऋत्यको नजिक बनाउनुपर्छ।
बालबालिकाहरूको शयनकक्ष पूर्व वा इशान कोणमा हुनुलाई शुभ मानिन्छ अध्ययन भवन, सभा र पठनपाठनका लागि यो क्षेत्र शुभ मानिन्छ ।
पाहुनाका लागि बनाइने स्थान उत्तर-पश्चिम वा त्यसको आसपास हुनुपर्छ।
संगीत वा नृत्य साधना आदिका लागि अलग स्थान बनाउन नसकिए दक्षिण-पूर्वमा बनाउनुपर्छ । मनोरञ्जन कक्ष दक्षिण वा पश्चिम नैऋत्यको नजीक बनाउनुपर्छ ।
← टेलिभिजनले कसरी काम गर्छ ?
वास्तु दोषमुक्ति तथा वास्तुशास्त्रबाट लिन सकिने लाभ →
अक्टोबर 22, 2016 नोभेम्बर 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
14 thoughts on “वास्तुशास्त्र अनुसार घरको के के कुन दिशामा हुनुपर्छ ?”
Pingback:वास्तु दोषमुक्ति तथा वास्तुशास्त्रबाट लिन सकिने लाभ | Science Infotech
Pingback:कस्तो हुनुपर्छ घरको ढोका ?
Pingback:वास्तुशास्त्र अनुसार घर बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने अत्यावश्यक कुराहरु
Pingback:ख्याल राख्नुहोस् ! यस्ता छन् घरजग्गा किनबेच गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
Pingback:जान्नुहोस् ! वास्तुशास्त्र अनुसार के गर्ने र के नगर्ने ? केहि उपयोगी टिप्सहरु
Pingback:जान्नुहोस् ! घरको गेट बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने ७ कुराहरु
Pingback:वास्तुशास्त्र अनुसार अध्ययन गर्ने कक्ष हुनुपर्छ यस्तो
Pingback:के तपाई कंगाल बन्नुभएको छ ? यी ५ कुराहरू घरमा राख्नुहोस् मालामाल भइन्छ
Pingback:वास्तुशास्त्र अनुसार बेडरुममा राख्न नहुने यी ५ चिजहरु
Pingback:निन्द्रा किन लाग्दैन ?
Pingback:तपाई राती निन्द्रा लाग्दैन, राम्ररी निदाउन यसो गर्नुहोस्
Pingback:वास्तशास्त्र अनुसार घरमा सुख शान्ति ल्याउनका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरु